कीर्तिपुर सन्देश साप्ताहिक: कीर्तिपुरका युवा संजय महर्जनको पहलकदमी विदेशमा कमाएको पैसाले स्वदेशमा व्यवसाय
कीर्तिपुरका युवा संजय महर्जनको पहलकदमी विदेशमा कमाएको पैसाले स्वदेशमा व्यवसाय
कीर्तिपुरका युवा संजय महर्जनको पहलकदमी
विदेशमा कमाएको पैसाले स्वदेशमा व्यवसाय
Kirtipur Sandesh Weekly /
कुनै पनि व्यक्ति विदेशमा रहरले जाँदैन, करले जान्छ । बाध्यतावश त्यो पनि खाडी मुलुकमा । स्वदेशमा आपूmले चाहेजस्तो काम नपाउने, काम पाए पनि जीवन गुजार्न पुग्ने ज्याला या तलब पाउँदैन । अरु ठूला ठूला पश्चिम मुलुकमा जान धेरै पैसाको खाँचो पर्छ । एउटा मध्यम परिवारको व्यक्तिले त्यो खर्च गर्न सक्दैन । अनि उसले खाडी मुलुकको बाटो तताउँछ ।
खाडी मुलुक पुगेर पनि राम्रो कमाई हुन्छ नै भन्न सकिंदैन । जिवित फर्कने ग्यारेन्टी पनि हुँदैन । हामीले देखिरहेका छौं दिनको ३–४ वटा लास एयरपोर्टमा आइरहेको छ । राम्रो काम पाएका व्यक्तिहरुले मनग्गे धन कमाएर ल्याएका छन । कोही २ वर्षमा फर्कन्छन्, कोही ५ वर्षमा फर्कन्छन् । तर पनि हात लाग्यो शुन्य भएकाहरु पनि छन ।
कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं.५ खाचो, दथल पाँगाका संजय महर्जनको कथा बेग्लै छ । उसले खाडी मुलुकमा १८ वर्ष काम गरेर मनग्गे धन कमाएर अहिले स्वदेश फर्किएका छन । विदेशमा कमाएको धनले स्वदेशमै व्यवसाय सुरु गरेको छ । की.न.पा. साविक १२ नं वडा खाचो, दथल पाँगाका बुवा गणेशमान महर्जन र आमा शान्ति महर्जनका जेठो छोराको रुपमा आजभन्दा ४२ वर्ष अघि जन्मनु भएका संजय महर्जनले आईं.ए.सम्म अध्ययन गर्नु भएको छ । उहाँको दुईजना भाइहरु र एउटी बहिनी पनि छन् । २०५४ सालको स्थानीय निकायको चुनावमा कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं.१२ मा नेपाली कांग्रेसको टिकटबाट नससमा विजयी हुनुभयो । विजय भएको एक देढ वर्षसम्म कुनै काम पाएन । घरमा बुबा एक्लैको कमाईले दुईजना भाइहरु र बहिनीको लालन पोषण गर्न गाह्रो भएको महसुस गर्नुभयो । जेठो छोराको नाताले घरमा बुबालाई सघाउने विचार ग¥यो । त्यहीबेला अबुधाबीको स्पानिस सुपरमार्केटमा सेल्सम्यानको लागि केही कामदार चाहिएको थाहा पाएर अन्तर्वार्ता दिन गयो । थुप्रैजनाको विचमा उहाँले अन्तर्वार्तामा पास गर्नुभयो । फ्री भिसा र फ्री टिकटमा खादी मुलुकतिर हान्निनु भयो । त्यतिबेला उहाँले विवाह पनि गर्नु भएको थिएन ।
त्यहाँ पाँच वर्ष काम गरेर आपूmले कमाएको पैसा घरमा पठाउनु हुन्थ्यो । त्यही पैसाले घरको खर्च तर्दै गयो । भाईहरुको पढाईमा सहयोग भयो । अबुधावी गएको पाँच वर्षपछि उहाँले विवाह गर्नुभयो । कीर्तिपुर द्यःध्वाखाका विन्दु महर्जनसंग । जसले स्नातक पास गरेकि थिइन । विवाह पछि पनि उहाँ अबुधावी हानिनु भयो । तर अर्कै काममा । सेल्सम्यानको काम गर्दै गर्दा उहाँले बुचरको काम सिक्नु भयो । स्कील जबमा जानुभयो । तलब पनि पहिलेको भन्दा धेरै महिनाको २ लाख तलब पाउँथ्यो । त्यही कमाईबाट उहाँले भाईहरुको लागि किराना पसल राखी दिनुभयो । पाँगाको यँच्वमा आफ्नो जग्गामा तीन भाईलाई हुने गरी ३ वटा ढोका, प्रत्येक ढोकामा २ वटा शतर हुनेगरी घर बनाउनु भयो । यसरी मध्यम परिवारबाट आफ्नो परिवारको इज्जत बढाई दिनुभयो । उहाँले आफ्नो श्रीमतीलाई पनि मास्टर डिग्री पढ्न उत्साहित गर्नुभयो । उहाँको श्रीमतीले पनि रुरल डेभलपमेन्टमा मास्टर डिग्री पास गर्नुभयो । प्राइभेट स्कुलमा पढाउन थाल्नुभयो । उहाँले अबुधाबीमै द्यबलथबल त्चभभ ज्यतभ िबलम च्भकयचत मा काम गर्न थाल्नु भयो । जहाँ महिनाको ३ लाख तलब पाउनु हुन्थ्यो । सन् १९९८ अगस्ट १५ मा विदेश जानु भएको सन् २०१६ डिसेम्बर महिनामा खाडी मुलुक अबुधाबीलाई अलविदा गरी संधैको लागि नेपालमा आउनु भयो । मनमा दृढ संकल्प र दृढ इच्छा शक्ति भयो भने जहाँ पनि सफल हुनसक्छ उहाँको कथन छ ।
भाईहरुलाईसमेत घर बनाएर र व्यापार गर्न पसल खोल्न लगाएपछि उहाँले आफ्नो लागि पाँगाको नमख्वाःमा चार आना जग्गा किनेर घर बनाउनु भयो । ११०० स्क्वाएर फुटको पाँच तल्लाको घर बनाएर बस्नु भएको छ । उहाँको पहिलो सन्तान छोरा सिजिन महर्जन अलि हुर्केपछि अर्को सन्तान छोरी सिविया जन्मेपछि भने उहाँले विदेशमा नबस्ने निर्णय गर्नुभयो । महिनाको ३ लाख तलब पाउने जागिर छाडेर स्वदेश फर्कनु भयो ।
त्यत्रो कमाई भएको जागिर छाडेर किन आउनु भएको भन्ने हाम्रो संवाददाताको प्रश्नको जवाफमा उहाँ भन्नुुहुन्छ, “पैसा साधन मात्र हो, साध्य होइन । जुनबेला म विदेश गएको थिएँ । त्यतिबेला स्वदेशमा बसेर काम गर्न मैले काम पाइनँ । व्यापार गर्न लगानी गर्ने धन छैन । अहिले मसँग लगानी गर्ने धन छ, परिवार छ । पैसा कसको लागि कमाउने ? आफ्ना सन्तानहरुको लागि कमाउने हो । अहिले बच्चाहरु ठुलो हुँदैछ । यतिबेला उनीहरुलाई दरिलो अभिभावकको जरुरत छ । दरिलो अभिभावकको अभावमा उनीहरुको पढाई विग्रीया अथवा कुलतमा लाग्यो भने मैले कमाएर ल्याएको पैसाको के काम ? त्यसैले बसेर केही काम गरुँ भन्ने आशयका साथ आएको हुँ ।” अहिले संजय महर्जनले पाँगाको यँचोमा आफ्नै घरमा प्लास्टिकका सामान, विजुली सामान र हार्डवेयरका सामानहरुको पसल थापेका छन । गत जेठ १३ गते शनिवार उहाँको बुबा गणेशमान महर्जनले उक्त पसलको शिलान्यास गर्नु भएको थियो । अहिले यँचो क्षेत्रमा नयाँ बस्ति विकास हुँदैछ । धमाधम घर बनाइरहेका छन । घर निर्माणमा प्रयोग हुने पाईप, हार्डवेयरका सामान, बाथरुम फिटिंग, पाईप, रंगहरु सबै उहाँको पसलमा रहेको छ । आफ्नो व्यापार राम्ररी फल्ने फुल्ने आशा उहाँले राख्नु भएको छ । उहाँको पसलले गर्दा अब धेरै सजिलो हुने कुरा स्थानीय व्यक्तिहरु बताउँछन ।
उहाँ भन्नुहुन्छ विदेशमा कमाएको पैसा स्वदेशमा लगानी गरेर आत्मनिर्भर हुने उद्देश्य रहेको छ ।
कीर्तिपुरका युवा संजय महर्जनसंग भएको कुराकानीको आधारमा तयार पारिएको हो ।